Shiinaha LEDD500 / 700 Saqafka sare ee laba-geesoodka ah ee Isbitaalka Nalalka Caafimaadka ee leh Soo-saareyaasha shahaadooyinka CE iyo alaab-qeybiyeyaasha. Wanyu
LEDD500 / 700 Saqafka Sare LED Labaad Madaxa Isbitaalka Iftiinka leh Shahaadooyinka CE
LEDD500 / 700 waxaa loola jeedaa laydh daaweyn isbitaal oo laba jibaaran.
Hoyga iftiinka caafimaad ee isbitaalku wuxuu ka samaysan yahay aluminium aluminium ah oo ay ku dhex jiraan saxan aluminium qaro weyn leh, oo waxtar weyn u leh kala-baxa kuleylka. Nalka waa guluubka OSRAM, jaalle iyo cadaan. Shaashadda taabashada LCD waxay hagaajin kartaa iftiinka, heerkulka midabka iyo CRI, dhammaantoodna waa lagu hagaajin karaa toban heer. Gacanta wareejintu waxay qaadataa gacan aluminium fudud oo meelaynta saxda ah. Waxaa jira seddex ikhtiyaar oo loogu talagalay hubka guga, kuwaas oo ku habboon qolalka qalliinka leh miisaaniyado kala duwan. Waxaad sidoo kale cusbooneysiin kartaa xakamaynta darbiga, nidaamka batariga ee keydka ah, kamarad lagu dhex dhisay iyo kormeere.
■ qalliinka caloosha / guud
■ cudurada haweenka
Surgery qalliinka wadnaha / xididdada / wadnaha
■ qalliinka neerfaha
Um traumatology / xaalad deg deg ah AMA
Ro cudurada wadnaha / TURP
■ cudurada / indhaha
1. Iftiin Qoto dheer
Iftiinka caafimaad ee isbitaalka wuxuu leeyahay suus fudud oo ku dhow 90% qeybta hoose ee qalliinka, sidaas darteed iftiin sare ayaa looga baahan yahay si loo hubiyo nalal deggan. Iftiinka caafimad ee isbitaal laba-geesoodka ah wuxuu bixin karaa ilaa 160,000 iftiin iyo ilaa qoto dheer iftiinka ilaa 1400mm.
2. Waxqabadka Hooska Fiican
Ka duwan kuwa soo saarayaasha kale ee iibsanaya muraayadaha indhaha, waxaan maalgashi badan gelineynaa si aan u horumarino muraayadaha muraayadaha indhaha oo leh wax soo saar wanaagsan. Nalalka LED-ka ee kala go'ay oo leh muraayad u gaar ah, waxay abuuraan goob iftiin u gaar ah. Is-dulsaarka iftiinka iftiinka kaladuwan ayaa barta iftiinka ka dhigaysa mid isku mid ah oo si weyn u yaraynaysa heerka hooska.
3. Isticmaalka saaxiibtinimo LCD Taabashada Muraayadaha
Heerkulka midabka, xoojinta iftiinka iyo muujinta midabka iftiinka caafimaadka ee isbitaalka ayaa si isku mid ah loogu badali karaa gudiga xakamaynta LCD.
4. Dhaqdhaqaaq Xor ah
Isku-darka guud ee '360' wuxuu u oggolaanayaa madaxa nalka caafimaadka ee isbitaalka inuu si xor ah ugu wareego dhinacyadiisa, wuxuuna siiyaa xorriyadda weyn ee dhaqdhaqaaqa iyo xulashooyinka meelaynta aan xadidnayn ee qolalka hoose.
5. Sumcad Caan ah oo Beddelaya Quwadda Korantada
Waxaa jira laba nooc oo ah sahaydeenna korontada beddelaysa, marka laga reebo kuwa caadiga ah, hawlgal xasilloon oo ka socda inta u dhexeysa AC110V-250V. Meelaha uu danabku aad u deggan yahay, waxaan ku siineynaa saad awood koronto oo ballaaran oo leh awood ka hortag fara-gelin xoog leh.
6. Isu diyaari Isticmaalka Mustaqbalka
Haddii aad ubaahantahay inaad sare u qaaddo laydhka kamaradda mustaqbalka, waad hore noogu soo ogeysiin kartaa, waxaananu samayn doonaa diyaargarow ku saabsan gundhigga hore. Mustaqbalka, waxaad u baahan tahay oo keliya gacan qabad leh kamarad ku dhex jirta.
7. Xulashada Ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah
Waxaa lagu qalabeyn karaa kamarad la dhisay iyo kormeere, darbiga koontaroolka koontaroolka koontaroolka, kontoroolka fog iyo nidaamka dib u soo celinta batteriga.
Iftiinka iftiinka (lux)
Heerkulka Midabka (K)
Tilmaamaha Midabaynta Midabka (Ra)
Heerkulka Saamiga Iftiinka (mW / m² · lux)
Qoto dheer Iftiinka (mm)
Ballaca Light Spot (mm)
Tirada LED (pc)
Nolosha Adeegga Iftiinka (h)
Hore: LEDD620620 Saqafka Nalka Dual Dome Qalabka Shaqeynta Caafimaadka ee leh Xakamaynta Darbiga
Xiga: DL500 Halogen Siraajadda Qalitaanka ee La Saarayo
LEDD620620 Saqafkii LED Dual Dome Medical Opera ...
LEDL500 iibka kulul ee LED dib loo soo celin karo Mobile Operat ...
LEDB730 Wall Mounting LED Laydhka Nalka leh Articula ...
LEDB200 LED Wall Fardoolay Nooca Imtixaanka Caafimaadka ...
LEDD500 Saqafka-Fardoolayda Single Dome Operati ...
LEDB260 LED Qalliinka Imtixaanka Qalliinka Nooca ...